समाजवादी पार्टी र राजपाबीच एकीकरण : नेपाली राजनीतिमा नयाँ हलचल | HimalDarpan
समाजवादी पार्टी र राजपाबीच एकीकरण : नेपाली राजनीतिमा नयाँ हलचल
समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबीच एकीकरण गर्ने सहमति भएको छ। समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालबीच भएको सहमतिअनुसार नयाँ गठन गरिने एकिकृत पार्टीको नाम जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल हुनेछ। ‘एकिकृत पार्टीको झण्डा समाजवादी पार्टीले प्रयोग गर्दै आएको आयातकार आकारमा रातो र हरियो रंगको बीचमा तारा हुनेछ,’ सहमतिमा भनिएको छ।
एकिकृत पार्टीको चुनाव चिन्ह राजपा नेपालले प्रयोग गर्दै आएको छाता हुनेछ। सो सहमति पत्रमा राजपा नेपालका तर्फबाट महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव र शरत सिंह भण्डारीले हस्ताक्षर गरेका छन् भने समाजवादी पार्टीका तर्फबाट बाबुराम भटराई, उपेन्द्र यादव, अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठले गरेका छन्।
राजपा नेपालको अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरु राजकिशोर यादव र अनिल झाको हस्ताक्षर सो सहमति पत्रमा छैन। हस्ताक्षरपछि गरिएको सामुहिक फोटोमा पनि ती दुई नेता देखिएका छैनन्।
किन भयो रातारात एकीकरण?
सरकारले सोमबार अचानक अध्यादेश ल्याई राजनीतिक दल बिभाजनलाई सहज बनाएपछि दुई दलबीच रातारात एकीकरण गर्ने सहमति भएको हो।
सरकारले सोमबार पारित गरेको अध्यादेशले कुनै पार्टीको केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलको ४० प्रतिशत सदस्यले चाहेमा सो पार्टी विभाजन गर्न सक्ने प्रावधान ल्याएपछि पार्टी विभाजन सहज भएको हो।
यसअघिको प्रावधानअनुसार कुनै पार्टीको केन्द्रीय सदस्य र संसदीय दल दुवैतर्फका ४० प्रतिशतले चाहेमा मात्र कुनै दल विभाजन गरी नयाँ दल गठन हुन सक्थ्यो।
नयाँ प्रावधानअनुसार समाजवादी पार्टीका सांसदहरुले ४० प्रतिशत पुर्‍याई नयाँ पार्टी गठन गर्ने तयारी गरेको सुइँको पाएर राजपा र समाजवादीबीच एकीकरणको सहमति भएको हो।
समाजवादी पार्टीकी उपाध्यक्ष रेणु यादव, सचिव इस्तियाक राइ लगायतले नयाँ दल गठन गर्ने तयारी गरेको बताइएको थियो।
उनीहरुले नयाँ दल गठन गर्नुअघि नै दुई दलबीच एकीकरण गरिएको हो। अब नयाँ पार्टी दर्ता भएपछि त्यसबाट छुट्टिन चाहनेले एकिकृत पार्टीकाे ४० प्रतिशत पुर्याए मात्र दलकाे मान्यता पाउनेछ।
तर, रेणु पक्षले पनि प्रयास जारी राखेको बताइएको छ।
एकीकरण गर्ने पक्षभन्दा पहिले नै नयाँ दल गठन गर्ने पक्ष निर्वाचन आयोग गएर दर्ता गर्न भ्याएमा त्यसले मान्यता पाउनेछ।
स्राेतहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समाजवादीबाट फुटेका सांसदहरुकाे पहिले नयाँ दल गठन गर्ने र त्यसपछि नेकपामै प्रवेश गराउने याेजना अनुसार अध्यादेश ल्याएका हुन्।
त्यहि चाल पाएर राजपा नेपाल र समाजवादीबीच एकीकरण गरिएकाे हाे।
पहिलेदेखि एकीकरणका लागि वार्ता गरिरहेका यी दुइ पक्षबीच अन्तत: सरकारले ल्याएकाे अध्यादेशकै कारण एकता हुन पुगेकाे छ भने रेणु यादव पक्षकाे ४० प्रतिशत पुर्याएर नयाँ दल गठन गरी प्रधानमन्त्री ओलीसँग एलायन्स गर्ने याेजना पुरा हुन्छ हुँदैन अनिश्चित छ।
नेतृ यादव गत दुई वर्षदेखि अध्यक्ष यादवसँग असन्तुष्ट छिन् । पार्टी सरकारमा जाँदा उनलाई सहभागी नगराए पनि उनको सिफारिसमा राज्यमन्त्री बनाउने वचन अध्यक्ष यादवले दिएको उनले आफू निकटस्थलाई बताउँदै आएकी छिन् । पर्सा–१ बाट निर्वाचित सांसद प्रदीप यादवलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाउन रेणुले प्रस्ताव गरेकी थिइन् । तर, अध्यक्ष यादवले महोत्तरी–४ बाट निर्वाचित सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई राज्यमन्त्री बनाए । गत मंसिर पहिलो साता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा डा. यादवलाई राज्यमन्त्रीबाट हटाएका थिए । स्वास्थ्यमन्त्री रहेका अध्यक्ष यादवलाई पनि जानकारी नै नदिएर कानुन मन्त्रालयमा सारिएको थियो ।
रेणुलाई साथ दिइरहेका पूर्वमन्त्री तथा नेता मोहम्मद इस्तियाक राईसहित काठमाडौंमा उपलब्ध अन्य सांसदहरूसँग पनि अध्यक्षद्वय भट्टराई र यादवले छलफल गरेका छन् । स्रोतका अनुसार उनीहरूले विगतको गल्ती भविष्यमा नदोहो¥याउने प्रतिबद्धता गर्दै राजपासँगको एकीकरणपश्चात् सबैलाई समान ढंगले लैजाने वचन दिएका थिए ।
अध्यक्षद्वयसँगको छलफलपछि सांसद रुही नाज र कलुदेवी विश्वकर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफू पार्टी फुटाउन लागेको हल्ला निराधार रहेको स्पष्टीकरण दिएका छिन् । पार्टी विभाजन गर्ने अभियानमा नाम जोडिएका सप्तरीका सांसद डा. सूर्यनारायण यादवले पनि आफू फुटको पक्षमा नरहेको नयाँ पत्रिकालाई बताए । केही महिनाअघि उनले सांसदबाट राजीनामा दिएका थिए, पछि फिर्ता लिए ।
पूर्वराज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादव पनि नेतृत्वसँग असन्तुष्ट थिए । पार्टी विभाजनकै लागि बुधबार साँझ उनलाई प्रहरीले जनकपुरबाट काठमाडौं ल्याएको आरोप समाजवादी पार्टीले लगाएको छ । पार्टीको संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईका सचिवालय प्रमुख विश्वदीप पाण्डेले बुधबार साँझ फेसबुकमा आफ्नो पार्टीका सांसद तथा नेता डा. यादवलाई प्रहरीले अपहरण शैलीमा जनकपुरबाट काठमाडौं ल्याएको आरोप लगाएका छन् । यद्यपि, डा. यादवको परिवार भने त्यसबारे मौन छ । ‘दिउँसोसम्म उहाँ महोत्तरीस्थित आफ्नो घरमै हुनुहुन्थ्यो, साँझको खबरबारे मलाई थाहा भएन,’ राज्यमन्त्री हुँदा डा. यादवको सचिवालयसमेत हेरेका र सम्बन्धमा सालासमेत पर्ने सञ्जय यादवले भने ।
नेतृ यादवलाई साथ दिइरहेका केही नेता र सांसद भने काठमाडौं आउन थालेका छन् । भारतीय सीमा क्षेत्रको क्वारेन्टाइन भ्रमण गरेपछि स्थानीय प्रशासनले पर्सामा होम क्वारेन्टाइनमा राखेका सांसद प्रदीप यादव बुधबार काठमाडौं आइपुगेका छन् । दिउँसो वीरगन्जबाट काठमाडौं आएको उनले बताए ।
सडक निर्माणमा सरकार बेखबर थियो वा सरकारको बुझ पचाई
पि.एस.जी.का प्रशिक्षक पोचेटिन्हो भन्छन्:- “मेसीका लागि क्लबको ढोका खुला छ।”
प्रिमियर लिग: घरेलु मैदानमा क्रिस्टल प्यालेससँग बराबरीमा रोकियो एभर्टन
डा.बाबुराम भट्टराईद्वारा नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई ओलीको सती नजान आग्रह